Maamulo oo ka hadlay Wararka Sheegaya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys Deegaanadooda uu baxsad ku yimid.	Maamulada Galmudug State iyo Ximin iyo Xeeb ayaa maanta si isku mid ah u beeniyay warar soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay oo ku aadanaa in Sheekh Xasan Daahir Aweys Saraakiil iyo ciidamo la socday oo Baraawe ka baxsady ay gaareen Deegaanada ay maamuladaan ka taliyaan. Wasiirka Arimaha Gudaha ee Maamulka Galmudug State oo Warbnaahinta Muqdisho la hadlay ayaa sheegay in Wararka sheegaya in Xasan Daahir uu Hobyo Doon uga soo dagay ay ka maqleen kaliya Idaacadaha balse aysan jirin meel kamid ah Deegaanadooda in uu soo gaaray Xasan Daahir iyo Ciidamo lasocda. Sidoo kale Afhayeen isna u hadlay Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa been ku tilmaamy Wararka sheegaya in Xasan Daahir iyo Saraakiil kale oo Shabaab katirsan ay soo gaareen Deegaano maamulkooda hoos yimaad kadib markii dhinaca Xeebta Doon kaga soo galeen. Ilo muhiim ah oo kusugan Gobolka Mudug ayaa xaqiijiyya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys ciidamo iyo Saraakiil lasocday ay ka dageen Xeebta Hobyo ayna uga sii gudbeen Deegaano kale oo Gobolka katirsan si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Daahir iyo Raga la socda ay ku wajahanyihiin Degmada Xara Dheere ee Gobolka Mudug halkaas ay joogaan Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo fikir ahaan taageersan Sheekh Xasan Daahir iyo Raga kale ee kasoo horjeeda Fikirka Amiirka Al-Shabaab. Wax war ah kama soo Bixin ilaa hada Hogaamiyaha Baxsadka ah ee Sheekh Xasan Daahir Aweys iyadoona Sheekha in uu baxsado ku kaliftay kadib markii Saraakiil iyo rag kale oo sar sare oo Shabaab katirsan isku fikirna ahaayeen uu qaarna dilay Qaarna Xabsiga Dhigay Hogaamiyaha Ururka Al-Shabaab Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr oo dadka qaar u yaqaanaan Axmed Godane. | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders Maamulo oo ka hadlay Wararka Sheegaya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys Deegaanadooda uu baxsad ku yimid.	Maamulada Galmudug State iyo Ximin iyo Xeeb ayaa maanta si isku mid ah u beeniyay warar soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay oo ku aadanaa in Sheekh Xasan Daahir Aweys Saraakiil iyo ciidamo la socday oo Baraawe ka baxsady ay gaareen Deegaanada ay maamuladaan ka taliyaan. Wasiirka Arimaha Gudaha ee Maamulka Galmudug State oo Warbnaahinta Muqdisho la hadlay ayaa sheegay in Wararka sheegaya in Xasan Daahir uu Hobyo Doon uga soo dagay ay ka maqleen kaliya Idaacadaha balse aysan jirin meel kamid ah Deegaanadooda in uu soo gaaray Xasan Daahir iyo Ciidamo lasocda. Sidoo kale Afhayeen isna u hadlay Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa been ku tilmaamy Wararka sheegaya in Xasan Daahir iyo Saraakiil kale oo Shabaab katirsan ay soo gaareen Deegaano maamulkooda hoos yimaad kadib markii dhinaca Xeebta Doon kaga soo galeen. Ilo muhiim ah oo kusugan Gobolka Mudug ayaa xaqiijiyya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys ciidamo iyo Saraakiil lasocday ay ka dageen Xeebta Hobyo ayna uga sii gudbeen Deegaano kale oo Gobolka katirsan si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Daahir iyo Raga la socda ay ku wajahanyihiin Degmada Xara Dheere ee Gobolka Mudug halkaas ay joogaan Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo fikir ahaan taageersan Sheekh Xasan Daahir iyo Raga kale ee kasoo horjeeda Fikirka Amiirka Al-Shabaab. Wax war ah kama soo Bixin ilaa hada Hogaamiyaha Baxsadka ah ee Sheekh Xasan Daahir Aweys iyadoona Sheekha in uu baxsado ku kaliftay kadib markii Saraakiil iyo rag kale oo sar sare oo Shabaab katirsan isku fikirna ahaayeen uu qaarna dilay Qaarna Xabsiga Dhigay Hogaamiyaha Ururka Al-Shabaab Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr oo dadka qaar u yaqaanaan Axmed Godane. – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
Maamulo oo ka hadlay Wararka Sheegaya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys Deegaanadooda uu baxsad ku yimid.	Maamulada Galmudug State iyo Ximin iyo Xeeb ayaa maanta si isku mid ah u beeniyay warar soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay oo ku aadanaa in Sheekh Xasan Daahir Aweys Saraakiil iyo ciidamo la socday oo Baraawe ka baxsady ay gaareen Deegaanada ay maamuladaan ka taliyaan. Wasiirka Arimaha Gudaha ee Maamulka Galmudug State oo Warbnaahinta Muqdisho la hadlay ayaa sheegay in Wararka sheegaya in Xasan Daahir uu Hobyo Doon uga soo dagay ay ka maqleen kaliya Idaacadaha balse aysan jirin meel kamid ah Deegaanadooda in uu soo gaaray Xasan Daahir iyo Ciidamo lasocda. Sidoo kale Afhayeen isna u hadlay Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa been ku tilmaamy Wararka sheegaya in Xasan Daahir iyo Saraakiil kale oo Shabaab katirsan ay soo gaareen Deegaano maamulkooda hoos yimaad kadib markii dhinaca Xeebta Doon kaga soo galeen. Ilo muhiim ah oo kusugan Gobolka Mudug ayaa xaqiijiyya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys ciidamo iyo Saraakiil lasocday ay ka dageen Xeebta Hobyo ayna uga sii gudbeen Deegaano kale oo Gobolka katirsan si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Daahir iyo Raga la socda ay ku wajahanyihiin Degmada Xara Dheere ee Gobolka Mudug halkaas ay joogaan Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo fikir ahaan taageersan Sheekh Xasan Daahir iyo Raga kale ee kasoo horjeeda Fikirka Amiirka Al-Shabaab. Wax war ah kama soo Bixin ilaa hada Hogaamiyaha Baxsadka ah ee Sheekh Xasan Daahir Aweys iyadoona Sheekha in uu baxsado ku kaliftay kadib markii Saraakiil iyo rag kale oo sar sare oo Shabaab katirsan isku fikirna ahaayeen uu qaarna dilay Qaarna Xabsiga Dhigay Hogaamiyaha Ururka Al-Shabaab Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr oo dadka qaar u yaqaanaan Axmed Godane.
June 25, 2013 BASHIR HASHI YUSSUF Leave a comment
Maamulo oo ka hadlay Wararka Sheegaya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys Deegaanadooda uu baxsad ku yimid.
Maamulada Galmudug State iyo Ximin iyo Xeeb ayaa maanta si isku mid ah u beeniyay warar soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay oo ku aadanaa in Sheekh Xasan Daahir Aweys Saraakiil iyo ciidamo la socday oo Baraawe ka baxsady ay gaareen Deegaanada ay maamuladaan ka taliyaan.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Maamulka Galmudug State oo Warbnaahinta Muqdisho la hadlay ayaa sheegay in Wararka sheegaya in Xasan Daahir uu Hobyo Doon uga soo dagay ay ka maqleen kaliya Idaacadaha balse aysan jirin meel kamid ah Deegaanadooda in uu soo gaaray Xasan Daahir iyo Ciidamo lasocda.
Sidoo kale Afhayeen isna u hadlay Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa been ku tilmaamy Wararka sheegaya in Xasan Daahir iyo Saraakiil kale oo Shabaab katirsan ay soo gaareen Deegaano maamulkooda hoos yimaad kadib markii dhinaca Xeebta Doon kaga soo galeen.
Ilo muhiim ah oo kusugan Gobolka Mudug ayaa xaqiijiyya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys ciidamo iyo Saraakiil lasocday ay ka dageen Xeebta Hobyo ayna uga sii gudbeen Deegaano kale oo Gobolka katirsan si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Daahir iyo Raga la socda ay ku wajahanyihiin Degmada Xara Dheere ee Gobolka Mudug halkaas ay joogaan Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo fikir ahaan taageersan Sheekh Xasan Daahir iyo Raga kale ee kasoo horjeeda Fikirka Amiirka Al-Shabaab.
Wax war ah kama soo Bixin ilaa hada Hogaamiyaha Baxsadka ah ee Sheekh Xasan Daahir Aweys iyadoona Sheekha in uu baxsado ku kaliftay kadib markii Saraakiil iyo rag kale oo sar sare oo Shabaab katirsan isku fikirna ahaayeen uu qaarna dilay Qaarna Xabsiga Dhigay Hogaamiyaha Ururka Al-Shabaab Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr oo dadka qaar u yaqaanaan Axmed Godane.
← Maamulo oo ka hadlay Wararka Sheegaya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys Deegaanadooda uu baxsad ku yimid.	Maamulada Galmudug State iyo Ximin iyo Xeeb ayaa maanta si isku mid ah u beeniyay warar soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay oo ku aadanaa in Sheekh Xasan Daahir Aweys Saraakiil iyo ciidamo la socday oo Baraawe ka baxsady ay gaareen Deegaanada ay maamuladaan ka taliyaan. Wasiirka Arimaha Gudaha ee Maamulka Galmudug State oo Warbnaahinta Muqdisho la hadlay ayaa sheegay in Wararka sheegaya in Xasan Daahir uu Hobyo Doon uga soo dagay ay ka maqleen kaliya Idaacadaha balse aysan jirin meel kamid ah Deegaanadooda in uu soo gaaray Xasan Daahir iyo Ciidamo lasocda. Sidoo kale Afhayeen isna u hadlay Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa been ku tilmaamy Wararka sheegaya in Xasan Daahir iyo Saraakiil kale oo Shabaab katirsan ay soo gaareen Deegaano maamulkooda hoos yimaad kadib markii dhinaca Xeebta Doon kaga soo galeen. Ilo muhiim ah oo kusugan Gobolka Mudug ayaa xaqiijiyya in Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys ciidamo iyo Saraakiil lasocday ay ka dageen Xeebta Hobyo ayna uga sii gudbeen Deegaano kale oo Gobolka katirsan si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Daahir iyo Raga la socda ay ku wajahanyihiin Degmada Xara Dheere ee Gobolka Mudug halkaas ay joogaan Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo fikir ahaan taageersan Sheekh Xasan Daahir iyo Raga kale ee kasoo horjeeda Fikirka Amiirka Al-Shabaab. Wax war ah kama soo Bixin ilaa hada Hogaamiyaha Baxsadka ah ee Sheekh Xasan Daahir Aweys iyadoona Sheekha in uu baxsado ku kaliftay kadib markii Saraakiil iyo rag kale oo sar sare oo Shabaab katirsan isku fikirna ahaayeen uu qaarna dilay Qaarna Xabsiga Dhigay Hogaamiyaha Ururka Al-Shabaab Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr oo dadka qaar u yaqaanaan Axmed Godane.